Ra’iisul wasaarihii hore ee DFS oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo:-Ra’iisul wasaarihii hore ee DFS Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana halkaas ku soo dhaweeyey masuuliin ka tirsan Maamulka Degmada iyo Gobalka Gaalkacyo iyo dadweyne aad u tiro badan .
Garoonka Diyaaradaha ee C/laahi Yuusuf Ahmed ayaa saaka waxaa buuxdhaafiyey dadweyne aad u tiro badan iyo masuuliin ka tirsan dowlada Puntland ,siyaasiyeen waxgarad iyo Isimo caan ka ah gobalka Mudug oo uu horkacayo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle Islaan Faarax .
Dhanka kale ciidamada Daraawiishta ee gobalka Mudug ayaa saaka si weyn u adkeeyey amaanka magaalada Gaalkacyo iyo garoonka Diyaaradaha ee C/laahi Yuusuf Ahmed waxaana ay u galbiyeen Ra’iisul wasaarihii hore ee DFS Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xarunta madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo.
Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadal kooban u jeediyey dadweynihii soo dhaweeyey ayuu marka hore u mahad celiyey wuxuuna amaanay masuuliinta iyo saraakiisha ku soo dhaweysay magaalada Gaalkacyo wuxuuna sheegay in uu haatan yahay Xildhibaan matala dowlada Puntland wuxuuna balan qaaday in socdaal kala duwan ku bixin doono gobalada Puntland .
Cod Raisulwasaarihii hore ee DFS iyo masawirada soo dhaweynta Dr Cabdi weli Maxamed Cali Gaas dib baan idiinka soo dhaweyn doonaa inshalaah .